I-Gîte yasemaphandleni kunye ne-Pool, i-WIFI, i-2 Bedrooms ye-2 BA - I-Airbnb
I-Gîte yasemaphandleni kunye ne-Pool, i-WIFI, i-2 Bedrooms ye-2 BA
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
Paulanosa Gite -Ilala 4 - 2 Amagumbi okulala - 2 Amagumbi okuhlambela.
I-Paulanosa yenye yee-gites ezintathu zasemaphandleni ezibekwe kwindawo enomtsalane "iBasse-Cour" ebekwe kumbindi welizwe lasePays de la Loire. Ziphephe izihlwele kweli hlotyeni kwaye wonwabele indawo eninzi yangaphandle kunye nedama lokuqubha langaphandle elishushu. Kukwakho nebar ye-onsite ethetha ukuba iigîtes zethu kunye neendwendwe zokulala nesidlo sakusasa zihlala zilungiselelwe kakuhle.
Ukulala 4: Amagumbi okulala ama-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi, isidlo sangokuhlwa, igumbi lokuhlala, ipatio, ibarbecue.
Imi kuwo wonke umgangatho ophantsi, le gîte ilula kunye neyamkelekileyo inamagumbi okulala ama-2, ii-en-suite ezi-2 ezineshawa kwaye zilala ukuya kuthi ga kwi-4.
Igumbi lokulala 1: Igumbi lokulala elinamabini aneen-suite eneshawari
Igumbi lokulala 2: Igumbi lokulala eliphindwe kabini eline-en-suite eneshawari
Ngamagumbi okulala angama-2x aneshawari yabucala nganye, kunye nekhitshi layo elivulekileyo elinesicwangciso esivulekileyo kunye nesidlo sangokuhlwa, igumbi lokuhlala elineTV (iitshaneli zaseFransi), kunye nepatio yangaphandle ene-barbecue, igite inikwe ngokugqibeleleyo ikhefu lokuzilungiselela. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, isikhenkcisi, itoaster, imicrowave, iketile, umatshini wekofu, ioveni enehobhu kunye nokhetho oluninzi lwezitya kunye nempahla. Igumbi lokuhlambela ngalinye linendawo yayo yesipili enkulu engamampunge, indlu yangasese, kunye neshawari. Iitawuli zegumbi lokuhlambela, kunye neelinen zokulala zibonelelwe, kunye nesomisi seenwele, kunye neendawo zokomisa iimpahla. Indlu yokuhlamba iimpahla yasekuhlaleni ibonelela ngofikelelo kumatshini wokuhlamba.
Nge-Wi-Fi enesantya esiphezulu sasimahla kuyo yonke indawo, ichibi ekwabelwana ngalo, kunye nendawo yokupaka simahla le gîte ngokuqinisekileyo iya kugcina ilungu ngalinye leqela lakho lonwabile.
Idama lokuqubha livuliwe ukususela ngoMeyi-Septemba (ngaphandle kweemeko zemozulu ezimbi).
Ilali yamandulo yase-Asnieres-sur-Vegre, ibonelela ngoxolo ngasemva ukuze ubalekele ezilalini. Ngeendonga zemilambo ezinomthunzi, isakhiwo senkulungwane ye-15, iimanoirs zakudala, iinqaba, kunye nebhulorho ebukekayo kulula ukubona ukuba kutheni le Petite Cité de caractère yaziwa njengenye yeelali ezintle kakhulu eSarthe. Kodwa nge-100km yeendlela zokuhamba ngebhayisikile eSarthe, kwaye kwi-39km kuphela ukuya kwisixeko sase-Gallo-Roman e-Le Mans kunye nesekethe yayo edumileyo ye-24H, uhambo alunakude kakhulu kwabo balufunayo.
ILa Basse-Cour yindawo entle ebekwe kwilali ebukekayo yaseAsnières-sur-Vègre.
Lo mhlaba ulikhaya le-'Manoir de la Basse Cour, indlu ye-manor yenkulungwane ye-15 enezindlu ezi-4 ezitofotofo zokulala kunye namagumbi asekuseni kunye ne "Gites de la Basse-cour" ezi-3 ezizimeleyo ezibekwe ngasemva. yepropati.
I-Basse-cour yinkampani yentsapho ephethwe yintsapho yaseNgesi eyashiya i-UK ngasemva kwi-Pays de la Loire yasemaphandleni e-2006. Ipropati ye-Basse Cour iye yabuyiselwa ngothando ukususela ngoko, ekugqibeleni kunye nokulungiswa kwe-manoir yi-2018.
Idolophana yaseFransi yendabuko, u-Asnières wanikezela ngoxolo oluncinci lwezulu kwintsapho eyayifuna ukuphunyuka kubomi obuphithizelayo besixeko. Umtsalane ococekileyo kunye nobuhle belali baphumelela ngokukhawuleza, kwaye ipropati, kunye nembono yayo emlanjeni kunye nemihlaba ezukileyo, yaziva njengekhaya. Usapho ngoku luchitha iintsuku zalo ezixakekileyo lunyamekela iindwendwe zalo, kunye nepropathi engasemva kwendawo entle yaseFransi
Ingcwele emangalisayo enika uxolo kunye nokuzola kubo bonke abandwendwela, iBasse-Cour iyakumema ukuba uhlale kwaye wenze isampulu yolonwabo lwayo.
Sinethemba lokukubona kungekudala!
Lo mhlaba ulikhaya le-'Manoir de la Basse Cour, indlu ye-manor yenkulungwane ye-15 enezindlu ezi-…